Ny kettlebell dia baolina vy natsangana miaraka amina tahony miraikitra eo an-tampony (mitovy amin'ny baomba vita amin'ny tafondro). Izy io dia ampiasaina hanatanterahana karazana fanazaran-tena marobe, ao anatin'izany ny fanazaran-tena amin'ny balistik izay manambatra ny fiofanana ho an'ny fo, ny tanjaka ary ny fahafaha-manao. Izy ireo koa no fitaovana voalohany ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena mampiakatra ny lanjan'ny kettlebell.
Lanja ADJUSTABLE: namboarina tamin'ny tahony kettlebell 10lbs sy takelaka vy azo esorina enina (ny takelaka tsirairay dia milanja 5lbs), ny Yes4All kettlebell fanatanjahan-tena dia azo ovaina amin'ny 10 ka hatramin'ny 40lbs mba hanampiana anao hampifanaraka ny fampihetseham-ponao amin'ny filanao manokana
HANDLE TEXTURED LEHIBE: Ny tahony somary voarindra dia manome fikajiana ahazoana aina sy azo antoka ho an'ny repoblika avo lenta, ka mahatonga ny tsaoka tsy ilaina ho an'ny lahy sy ny vavy. Mekanika fanidiana azo antoka ho an'ny filaminana
KETTLEBELL voaravaka vovoka avo lenta: misakana ny harafesina sy mampitombo ny faharetana ny fonosana vita amin'ny vovoka, ary manome anao tanjaka mitazona tsara kokoa tsy misy solafaka eny an-tananao toy ny famaranana manjelanjelatra
FOTOTRA FOTOTRA HO AN'NY FITONDRANA: Alefaso ny fitehirizana mitsivalana, mety tsara ho an'ny laharana, mpihetsiketsika, pataloha poleta nitaingina ary fampihetseham-batana hafa mitaky kettlebell miaraka amin'ny farany ambany
FITAOVANA FITIAVANA VERSATILE & Functional: Ampiasaina amin'ny swing, deadlift, squats, lifting, get-ups & snatch ho fampihetseham-batana & hampitomboana ny tanjaky ny vondrona hozatra sy ny faritra misy ny vatana, anisan'izany ny bisikileta, soroka, tongotra ary maro hafa
Malama sy haingana: ny rafitra mitondra ny baolina dia misoroka ny fiolahana, ny familiana na ny famoritana toy ny tady fanatanjahan-tena hafa, manome antoka ny fihodinana milamina sy milamina izy io, satria ny tadim-pisiantsika dia mahazaka enta-mavesatra, izay mitondra fanatanjahan-tena tonga lafatra amin'ny tadinao, manome ny tsara indrindra koa fahaiza-miteny ho an'ireo matihanina manatanjaka tena.
Fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena: ny tady fanazaran-tena ataontsika dia afaka mamolavola ny fiaretanao kardio, ny tanjakao ary ny hafainganana, sady manatsara ny fihenjanan'ny hozatry ny vatanao iray manontolo. Safidy tsara ho an'ny ady totohondry, MMA ary fiampitana.